फ्रेन्चाइज फिल्मको उद्देश्य एउटै हुन्छ, जसरी हुन्छ पैसा कमाउने । फिल्मको आधारभूत मर्म र मान्यतालाई आत्मसात् नगरी बजारले जे खोजेको छ, त्यही पस्कने ध्याउन्न हुन्छ फिल्मकर्मीमा । हाउसफुल ४ पछिल्लो उदाहरण हो ।
बेअर्थी कमेडीकै कारण हाउसफुल नामधारी तीन फिल्मले मनग्ये दाम कमाए । निर्माता साजिद नाडियाडवालाले हाउसफुल ४ बनाएर यही व्यावसायिक सफलतालाई निरन्तरता दिन खोजेका छन् । यसका लागि अघिल्ला फिल्मको धेरथोर साख पनि समाप्त पारिएको छ । जबर्जस्ती हसाउनुबाहेक निर्देशकद्वय साजिद–फर्हादको अर्को नियत देखिन्न । प्याडम्यान, ट्वाइलेट, गोल्ड, मिसन मंगलजस्ता फिल्मबाट अक्षयकुमारले कमाएको ख्यातिमाथि यस फिल्मले कठोर सवाल खडा गरेको छ ।
हेयर ड्रेसर ह्यारी (अक्षयकुमार) को भुल्ने बानी छ । बिर्सने बानीले गर्दा उनले खुंखार डन माइकल (मनोज पाहवा) को ५० लाख डलर नष्ट गरिदिन्छन् । माइकलले पैसा फिर्ता नदिए मार्ने धम्की दिएपछि ह्यारीसँगै साथीहरु म्याक्स (बबी देवल) र रोय (रितेश देशमुख) पनि संकटमा फस्छन् । यसबाट उन्मुक्ति पाउन अर्बपति बाबुका तीन छोरी कृति (कृति सानोन), नेहा (कृति खरबन्दा) र पूजा (पूजा हेग्डे) सँग बिहे गर्ने चाल रच्छन् । तर निम्न आय भएका उरन्ठेउला ह्यारी, रोय र म्याक्सले धनी केटीको मन जित्लान् ? ह्यारीको बिर्सन बानीको जड के होला ? यिनै सवाल वरपर घुमेको छ फिल्म । हेर्दै जाँदा क्लाइमेक्स अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
बलिउडमा कमेडी फिल्मको लर्को छ । अन्धाधुन, बरेलीकी बर्फीजस्ता शानदार कमेडी फिल्म पनि नबनेका होइनन् तर अधिकांश फिल्म स्टारडम, पन्चलाइन र द्विअर्थी संवादकै भरमा चलाउन खोजिन्छ । हाउसफुल ४ यसभन्दा अलग छैन । फरक कत्ति मात्र भने यसको कथा वर्तमान समयमा मात्र सीमित छैन, ६ सय वर्षअगाडिको समयसँग समेत सरोकार राख्छ । बाहुबली मार्काकै फिल्ममा देखिएका सेट छन्, राजा बन्ने होड र खुट्टा तान्ने खेल छ । तर रत्तिभर विश्वसनीय लाग्दैन । राजा, राजकुमार, प्रजा, भिन्न राज्यबीचको लडाइँ, प्रेममा जबर्जस्ती हास्य घुसाइएको छ । तर्क र कारण खोज्दा लभगभ सबै दृश्यमा भाउन्न हुन्छ ।
मल्टिस्टारर, भव्य क्यानभास, एकअर्काका प्रेमिका साटिने, लन्ठु केटाहरुले पैसाका लागि धनी परिवारकी छोरी पट्याउने, बीचमा एउटा भिलेन निस्कने र त्यसलाई सबै मिलेर सखाप पार्ने, अघिल्ला हाउसफुल यही परिधिमा रुमल्लिएका हुन्थे, यसपटक पनि त्यस्तै हो । हरेक मुख्य पात्रलाई अहिले र ६ सय वर्षअगाडिको दुई हुलियामा देख्न पाइन्छ । तर उनीहरुको चालढाल उस्तै हुन्छ ।
ह्यारीले अन्य साथी र प्रेमिकाको दिदीबहिनीलाई याद फर्काउने दृश्यहरु केही हदसम्म रोचक लाग्छ । नत्र पूरा फिल्ममा साजिद–फर्हादले कमेडीको नाममा कथा र दर्शकको चेतनास्तरमा खेलबाड गरेका छन् । त्यसैले त फिल्म हेरेपछि खिन्न भइन्छ । यसको पटकथा पनि यही जोडीले लेखेको हो ।
अरु त अरु, अतिथि भूमिकामा देखिएका नवाजुद्दिन सिद्दिकी र राना दग्गुवत्तीले समेत निराशा पार्छन् । नवाजुद्दिनले सेक्रेड गेम्सको प्रतिष्ठित संवाद ‘कहिलेकाहीँ त लाग्छ म नै भगवान हुँ’ माथि मजाक गरेका छन् । उनको झाँक्री चरित्रले कुनै कोणबाट फिल्मको स्तरवृद्धिमा भूमिका खेलेको छैन । राना दग्गुवत्तीचाहिँ बाहुबलीको परिचित भल्लालदेवकै झल्को दिने चरित्रमा हल्का ढंगले प्रस्तुत भएका छन् ।
निर्देशकद्वयले बलिउड र भारतीय समाजमा चर्चित हरेक पक्षलाई घोलघाल पारेर मसलेदार बनाएका छन् तर उही, कथा र पात्रअनुरुप नभई मनमौजी शैलीमा घुुुसाइएको छ । अक्षयकुमार, बबी देवल र रितेश देशमुखको चरित्र र अभिनय दुवै अतिरञ्जित लाग्छ । तुलनात्मक रुपमा कृति सानोन, कृति खरबन्दा र पूजा हेग्डे प्रभावशाली छन् । ‘वाला...’, ‘भूत...’ जस्ता गीत सुन्दा रमाइलो लाग्छ तर फिल्ममा खास अर्थ छैन ।
यति भनिरहँदा छुटाउन नहुने कुरा के हो भने बेतुकका कमेडीमा रमाउने र हासउफुल सिरिजका खाँटी फ्यानलाई भने हाउसफुल ४ ले निराश पार्दैन । फिल्ममा थोरै मात्र विश्वसनीय आधार खोज्नेका लागि त समय र पैसाको बर्बादी मात्र हो ।
फिल्म : हाउसफुल ४
निर्देशक : सजिद–फर्हाद
कलाकार : अक्षयकुमार, बबी देवल, रितेश देशमुख, कृति सानोन आदि ।
विद्या : कमेडी
समय : २ घन्टा २५ मिनेट
रेटिङ : १/५